Haweeneydii ugu Horeysay oo Muslim ah ee UK Garsoore Ka Noqotay | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — August 14, 2020
Waa sheekada Dhiirigalinta Leh ee Jawaahir Rooble: Haweeneydii ugu Horeysay oo Muslim ah oo UK Garsoore Ka Noqotay, Ujeedadeeduna Tahay Inay Garsoore ka Noqoto Ciyaaraha Premier League
Jawaahir Ahmed waxa ay rajeyneysaa inay noqoto qofkii ugu horeyey oo dumar ah oo garsoore ka noqdo cayaaraha UK. Iyada oo Toban jir ah ayey UK timid waxayna la socotay waalidkeed oo kasoo cararay/qaxay dagaaladii sookeeya ee Soomaaliya.
Jawaahir Rooble oo ah gabar Muslimad ah oo Soomaaliyeed ayaa noqotay garsooraha kaliya ee sida Rasmiga ugu diiwaan gishan FA ee xirta Xijaab kulamada ay dhex dhexaadineyso.
Markii ay UK imaadeen waxay dageen Wembley oo ka tirsan London. Jawaahir Rooble waxa ay tiri: “Jaceylka ay kubada cagta u qabtay oo kali kama aysan caawin in saaxibo yeellato balse bulshada ayey dhex-gashay, inkastoo luuqadda Ingiriiska aysan ku hadlin waqtigaas”.
“Uma baahnid in aad barato luuqadda, waliba marka aad rabto in aad ciyaarto kubada cagta” waxaa sidaa yiri ” Jamia Gardner oo madax ka ah Ururka Saxaafadda.
Jawaahir Rooble waxaa sidoo kale loo yaqanaa Jawaahir Jewels ama JJ waa garsoore ku dhalatay Soomaaliya balse haysato dhalashada dalka Ingiriiska. Daily Telegraph ayaa ugu yeeray “garsooraha ugu cajiibka badan ee gudaha Ingiriiska”.
“Kubada cagta si fiican ayey ii caawisay, shaqsi ahaan ayaan hormarey, mararka qaarna ma fududo in aad la xariirta dadka, gaar ahaan caruurta, taasina waa sababta aan ku billaabay barashada luuqada, waxaan dugsiga u keeni jiray kubadeyda gaarka ah, si ay caruurta igu imaadan, Caruurta marka ay arkaan, waxa ay dhihi jireen Jawaahir kubad baad wadataa, fadlan makula ciyaari karnaa”
Jawaahir markii hore waxa ay qabtay riyo ah inay noqoto ciyaartooy kubada cagta ah, balse riyadaasi waa lasoo af-jaray ka dib markii ay Waalidkeed ka mamnuceen ciyaarta. Diiditaanka loo diiday ciyaarida kubada cagta, Jawaahir waxa uu u rogay in ay noqoto garsoore.
“Waxa aan billaabay si mutadawacnimo ah inaan ula shaqeeyo naadiyada maxaliga ah,waxaa la ii sheegay horayaalka maxaliga ee gabdhaha in aysan heysan garsoore ku filan, waxaana ka codsaday in aan la shaqeeyo si iskaa wax u qabso ah” ayey tiri Jawaahir.
Waxa ay aheyd maalin sabti ah cimilida aad ayey u qaboobanayd, toos ayaana u galley,waan jecelahay kubada cagta iyo qawaaniinteeda, waxaan bartay in aan qadariyo garsoorayaasha, aad ayaana ugu faraxsanaa inaan siiyey fursadaas.
“Qorshaheyga noloshu waxa uu ahaa inaan noqdo xirfadle kubada cagta,sannado yar ka dib waxan noqoday mid xiiseyneysay garsooraha. Taasi waligeey ma aheyn qorshaheyga, laakiin waan ku faraxsanahay inay taasi dhacday.” Ayey tiri.
Jawaahir ayaa sheegtay in lagu dhago hadlo iyadoo kuwa qaar ay dhahaan ‘Goorma ayuu soo daahiri doonaa Garsooraha Munaasibka ah’ halka qaarna ay soo jeediyeen inay ka jeesatay Diinteeda Islaamka.
Hadana waxay rajaynaysaa inay garsoore ka noqoto Premier League ama Super League-ga maalin uun.
“Xaqiiqdii taasi waa hadafkeyga”ayey tiri
“Waxaan joogteeyey jimsiga, waxaan dhiman culeyskayga, waxaan noqday qof caato ah, Jaamacadii way I dhammaatay,halkaas ayaan kaga tagay howlahaas oo idil”.
“Dadka Online ka waxay dhaheen waxyaabo sida, ‘Xitaa uma hogaansameysid diinta, uma hogaansameysid dhaqanka,” Jawaahir Rooble ayaa sidaa hadalkeeda ku bilwoday.
Waxyaabo Qariib ah. Dabcan kubbada cagta ma ahan Dhaqankeyga. Balse waxaan halkan u joogaa inaan jabiyo fikradaha khaladka ah. Gabdhuhu way ciyaari karaan kubbada cagta, Gabdhuhu way sameyn karaan wax kasta oo ay doonaan.
Aad ayaan u nasiib badanahay, ayay hadalkeedii sii raacisay:
“Waxaan ahay haweenay madow, muqaal ahaana xijaaban oo muslim ah, uma maleynayo inaan soo xusuusan doono wixii shilal ahaa. Mar waalid ayaa ii yimid oo igu dhahay garsoore qof ayaa kugu yiri hadal takooris ah, waa in aad cayrisaa, laakin marka laga reebo dhacdadaas wax dambe lama kulmin, aad ayaan u nasiib badnahay”
Tags: Markii Ugu Horeysey oo Gabar Muslim Soomaali ah ey Garsoore Ka Noqoto Horyaalka Ciyaaraha UK.
Next post Xariirka Imaraatka iyo Israa'iil: Maalin Kale oo Mugdi leh oo Loogu Talagalay Reer Falastiin
Previous post Soomaaliya Sidaan Macquul uma Ahanee, Maxaa Xal ah?